Taliye ka tirsan Maamulka Galmudug oo Beeniyey in ay geysten dhac iyo danbiyo kale
Taliyaha Qeybta Booliiska Gobolka Mudug ee Maamulka Galmudug ayaa waxa uu waxba kama jiraan ku tilmaamay warar sheegaya in ciidank uu taliyaha u yahay ay geesteen gabood fallo iyo dhac ay kula kaceen dadka dega Gobalkaasi.
Waxa uu sheegay in unan ka warqabin haba yaraatee wax dhac ah oo ay ku kaceen askrta uu hormuudka u yahay. waxa uuna ku nuux nuuxsaday in aanan loo dulqaadan doonin in askarta ay falalkaasi ku kacaan waaba haday jirto in ay geesteen falal ceenkaasi ah.
Taliyaha ayaa waxa uu sidoo kale soo hadal qaaday wada shaqeenta ka dhaxeeyso ciidamada Puntland iyo Galmudug waxa uuna sheegay in ay dhax marto wada shaqeen wanaagsan oo uu sheegay in markii ugu dambeeay ay Ciidamada Galmudug ay gacanta u Galiyeen Puntland gaari lagasoo cararay dhanka Puntland.
waxuuna ugu dambeyntii sheegay in dad walaalo ah ay dagaalaan ayna ka heshiiyaan, Galmudug iyo Puntalnd ay gacmaha is qabsadeen oo ay ilooween colaadahii dhax maray.